ကိုရီးယားကား အပိုပစ္စည်း အမျိုးမျိုးဖြန့်ချီပေးနေသော Dongh... | CarsDB
ကိုရီးယားကား အပိုပစ္စည်း အမျိုးမျိုးဖြန့်ချီပေးနေသော Donghwa Sangsa Co., Ltd
Donghwa Sangsa Co., Ltd သည် ကိုရီးယား ကားမျိုးစုံ အတွက် Spare Parts များကို ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်း ဖြန့်ချီပေးခြင်းဖြစ်သည့်အပြင် မည်သည့်Spare Parts အမျိုးအစားကိုမဆို ဈေးနှုန်း သက်သာ စွာဖြင့်အလုံအလောက် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။၎င်း အပြင် Spare Parts Map Program ကိုအသုံးပြုပြီး ကားအမျိုးအစားအလိုက် ပါဝင်သော Spare Parts များကို အတိအကျ သိရှိနိင်သောကြောင့် မိမိကား Chassis No. အသိပေးရုံဖြင့် လိုအပ်သော Spare Parts ကို အမှားအယွင်းမရှိ တိကျသေချာစွာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Customer များအနေဖြင့် အရည်အသွေးစိတ်ချရသော Filter များကိုသုံးစွဲ ခြင်းဖြင့် အရည်အသွေးနိမ့်သော Filter များသုံးစွဲရာမှ ဖြစ်ပေါ်တက်သော အင်ဂျင် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း ကဲ့သို့သော ဆိုးကျိုးများမှ ကင်းဝေးနိုင်ပါသည်။ထို့အပြင် Car Parts ပစ္စည်းများကို Warranty ပေးထားပြီး အာမခံချက် အပြည့်အဝ ရှိသဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်။နယ်မှ ပစ္စည်းမှာယူလိုသော Customer မျာအတွက် အဝေးပြေးကားဂိတ်မှ တစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ပေးသည့်အပြင် ကိုယ်စာလှယ်ယူလိုသူများ၊ လက်လီ/လက်ကား ပြန်လည် ရောင်းချ လိုသူများအား နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။
Korea Auto Parts Distribution
v Cylinder Head ,Engine-Short
v Piston, Connecting Rod , Piston Ring
v Crank Shaft ,Cam Shaft ,Balance Shaft
v Shock Absorber, Stab-Link, Stabilizer Bar Joint
v Torsion Bar , Bush
v Ball Joint (Upper / Lower), Tie Rod, Bearing
v Spring Assy, Shackle Assy, Bush
v Upper Arm ,Lower Arm
v Brake Disc /Drum, Brake Wheel Cylinder, Clutch Cover & Disc, Cylinder & Hose, Clutch Master Cylinder
v Muffler, Exhaust-Pipe
v Gasket (Engine Head, Engine Overhoul), Oil-Seal
v Starter Motor, Alternator, Compressor, Turbo
v Injection Pump, Power Pump, Water Pump,Oil Pump, Pump Asssy Coolant
v Injctor, Nozzle
v Radiator, Condensor, Fan Clutch, Fan
v A/C Hose, Water Pipe
v Air Filter, Oil Filter, Diesel Filter, Air-con Filter
v Air-Flow Sensor, Tensioner
v Cable Assy, Glow Plug, Spark Plug
v Handle, Wiper,Wheel Bolt & Nut
v Mirror, Side-Mirror, Holder,Glass Gear, Glass Motor
Contact Address - အမှတ် (၁၁/ဒီ) ၊ မြေညီထပ် ၊ပါရမီ စိန်ဂေဟာအနီး၊(၁၆) ရပ်ကွက် ၊လှိုင်မြို့နယ် ၊ရန်ကုန်။
Contact Phone -09 250852178
Contact Mobile -09 250744478, 09 43049884
Email - donghwasangsa@gmail.com
Facebook - https://www.facebook.com/DonghwaSangsaKoreaAutoParts
Donghwa Sangsa Co., Ltd သညျ ကိုရီးယား ကားမြိုးစုံ အတှကျ Spare Parts မြားကို ကိုရီးယား နိုငျငံမှ တိုကျရိုကျတငျသှငျး ဖွနျ့ခြီပေးခွငျးဖွဈသညျ့အပွငျ မညျသညျ့Spare Parts အမြိုးအစားကိုမဆို စြေးနှုနျး သကျသာ စှာဖွငျ့အလုံအလောကျ ဝယျယူရရှိနိုငျပါသညျ။၎င်းငျး အပွငျ Spare Parts Map Program ကိုအသုံးပွုပွီး ကားအမြိုးအစားအလိုကျ ပါဝငျသော Spare Parts မြားကို အတိအကြ သိရှိနိငျသောကွောငျ့ မိမိကား Chassis No. အသိပေးရုံဖွငျ့ လိုအပျသော Spare Parts ကို အမှားအယှငျးမရှိ တိကသြခြောစှာ ရှေးခယျြဝယျယူနိုငျပါသညျ။
Customer မြားအနဖွေငျ့ အရညျအသှေးစိတျခရြသော Filter မြားကိုသုံးစှဲ ခွငျးဖွငျ့ အရညျအသှေးနိမျ့သော Filter မြားသုံးစှဲရာမှ ဖွဈပျေါတကျသော အငျဂငျြ ထိခိုကျပကျြစီးခွငျး ကဲ့သို့သော ဆိုးကြိုးမြားမှ ကငျးဝေးနိုငျပါသညျ။ထို့အပွငျ Car Parts ပစ်စညျးမြားကို Warranty ပေးထားပွီး အာမခံခကျြ အပွညျ့အဝ ရှိသဖွငျ့ ယုံကွညျစိတျခစြှာ ဝယျယူအားပေးနိုငျပါသညျ။နယျမှ ပစ်စညျးမှာယူလိုသော Customer မြာအတှကျ အဝေးပွေးကားဂိတျမှ တဈဆငျ့ ပို့ဆောငျပေးသညျ့အပွငျ ကိုယျစာလှယျယူလိုသူမြား၊ လကျလီ/လကျကား ပွနျလညျ ရောငျးခြ လိုသူမြားအား နှေးထှေးစှာ ကွိုဆိုလကျြရှိပါသညျ။
Contact Address - အမှတျ (၁၁/ဒီ) ၊ မွညေီထပျ ၊ပါရမီ စိနျဂဟောအနီး၊(၁၆) ရပျကှကျ ၊လှိုငျမွို့နယျ ၊ရနျကုနျ။
Posted at: 14-08-2014 16:03 PM